के लेखिरहेका छौं हामी ? - MazzakoNews
Home / Uncategorized / के लेखिरहेका छौं हामी ?
Ranjan AC 19th September 2017	Uncategorized Leaveacomment
व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो केही बिगार नगरेको व्यक्तिसँग जोरी खोज्नुपर्छ पत्रकारले समाजका लागि बिगार गरेको छ भने । योगीले झैं जे भइरहेको छ राम्रैका लागि भइरहेको छ, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने छुट पत्रकारलाई पटक्कै हुँदैन । पत्रकार युवराज घिमिरे सधैं भन्नुहुन्छ, ‘पत्रकारिताको धर्म आलोचना हो । तर कहिलेकाहिँ पत्रकारिता र व्रmान्तिकारिताबीच कत्ति फरक पनि देख्दैनौं हामी । पत्रकारिता भनेको क्रान्तिकारिता पनि होइन, पत्रकारितै हो ।’
रुखबाट स्याउ त न्युटनको टाउकोमा मात्रै खसेको थिएन । जहिलेदेखि यो धर्तीमा स्याउको रुख भयो र फल्न थाल्यो त्यहिल्यैदेखि खसिरहन्थ्यो । त्यही सामान्य कुराको कारण खोज्दा न न्युटनले गुरुत्व शक्ति पत्ता लगाए । पानी उमाल्दै गरेको किट्लीको ढकनी त जेम्स वाटको घरको अगेनोको आँगोले मात्रै उचालेको थिएन । हरेकको घरमा त्यसैगरी ढकनी उचालिन्थ्यो बाफले । अरुले जस्तै सामान्य लिएका भए जेम्सवाटले वाष्पशक्ति र स्टिम इन्जिन पत्ता लगाउन सक्थे होलान् र ? अरु सर्वसाधारणले जस्तै यहाँ यस्तै हुन्छ, यो त व्यावहारिक कुरा भन्न थालिएको छ र हामी पत्रकारले विकृति विसंगतिमा पनि समाचार देखिरहेका छैनौं ।
Next घर अगाडि सडकमा खाल्डो छ ? २४ घण्टामा महानगरले बनाउँछ
पानी नचल्ने औंठाछाप तिम्रो बाउको चुनाव चिन्हमा चल्छ भने तिम्रो हातको सिंदुर मेरो सिउँदोमा चल्नुपर्छ
सामाजिक सञ्जालबाट यौन पार्टनर खोज्ने व्यवसाय गर्ने युवा समातिएपछि… कलेज गर्लदेखी मोडलसमेत !
लालबाबुका प्रतिबद्धता (भिडियो): मागेर र भागेर देश बन्दैन, जनता भगवान हुन् म सेवक, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई छाड्दिनँ ।